Xuska Munaasabada Sanad Guurada 17 aad Ee Kasoo Wareegtay Aas-aaska X.D.SH.S.I Oo Maanta Siwayn Looga Xusay Guud Ahaanba Deegaanka Gaar Ahaana Caasimada Jigjiga. - Cakaara News
Xuska Munaasabada Sanad Guurada 17 aad Ee Kasoo Wareegtay Aas-aaska X.D.SH.S.I Oo Maanta Siwayn Looga Xusay Guud Ahaanba Deegaanka Gaar Ahaana Caasimada Jigjiga.
Jigjiga(CN) Sabti.Mar.07.2015, waxaan la iska indho saabi karin hagardaamooyinkii iyo Dibindaabyooyinkii ay dhaxlsiiyeen Guud ahaan shacabwaynaha reer itoobiya Talisyadii shuuciga ahaa ee wadanka xukumi jiray intii ka horaysay midhihii ka dhashay Halgankii EPRDF xukunka kaga tuureen Dhergigii taasoo u furtay Qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya bog cusub ama waa cusub oo sugay dhamanba Xuquuqihii iyo Jiritaankii Qowmiyadaha ee ay Itoobiyadii shalay uus-xabaashay.
Shaki kuma jiro in fursadaha iyo faaiidooyinka laga dhaxlay Dimoqraadiyada itoobiyada maanta ee curatay itoobiyada cusub ay dhamaanba Qowmiyadaha gaar ahaana Qowmiyada Soomaalida Itoobiya kaga soo kabteen hagardaamooyinkii,Tacadiyadii,xasuuqii iyo xaqiraadii islamarkaana hiigsadeen hirgalinta dimuqoraadiyada sugida xuquuqada muwaadiniinta iyo hiigsiga gaadhiga iyo ka midho dhalinta horumar waara.
Waxaan caadka saarnay bulshada deegaanka tan talka iyo caalamkaba in uu DXSHSI sanadihii ugu danbeeyay guulka mug leh ka gaadhay meelmarinta hirgalinta hayaanka qorshayaasha horumarineed, xasilinta guud ahaanba amaanka deegaanka iyo hirgalinta maamulka suuban, waanta taasi tan maanta keentay in si horumarineed looga dabaaldag xuska maalinta aas aaska xisbiga.
Haddaba Iyada oo maanta guud ahaanba deegaanka si meeqaam sare ah looga dabaal dagay xuska sanad guurada 17 aad ee ka soo wareegtay aas aaska XDSHSI, ayaa waxay munaasabad siwayn loo soo maamuusay loo qurxiyay ka dhacday xarunta deegaanka ee jigjiga.
Munaasabadan dabaal daga xuska maalinta aas aaska XDSHSI oo maalmihii ugu danbeeyay si balaadhan loogu sii diyaar garoobayay xukuumada xisbiga iyo shacabkuba ay ku muujinayeen jacaylka maalintan ay u qabaan ayaa saaka jawi aad u qurux badan uga qabsoontay hoolka shirarka ee Sayid MCX.
Munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta sare ee xukuumada DDSI oo ay ka mid yihiin gudoomiyiha XDSHSI ahna afhayeenka golaha baarlamaanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq, ku simaha madaxwaynaha ahna madaxwayne ku xigeenka DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax, madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan , golaha capienta DDSI, golaha wasiirada DDSI masuuliyiin ka socday xisbiga EPRDF, ugaasyada, garaadada, suldaanada, cuqaasha, haweenka, dhalinyarada, shaqaalaha dawlada, qurba joogta u dhalatay deegaanka iyo waliba marti sharaf kale.
Ugu horayntii waxaa munaasabadan lagu furay heesta calanka DDSI waxaana khubadii furitaanka ka soo jeediyay gudoomiyahah XDSHSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq wuxuuna ugu horayntii ugu hanbalyeeyay shacabka deegaanku meel kasta oo ay joogaan dalka iyo dibadaba xuska mudaanabadan qaaliga ah.
Wuxuuna gudoomiyuhu ka warbixiyay dadaalada xoogan ugu jiro guul ka gaadhay ka dhimo dhalinta dhamaadka qorshihii growth and transformation plan (GTP) isbadalka koboca dhaqaalaha ee 5 sano ee uu dalka iyo deegaankuba kaga mid noqonayaal wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.
Waxaa kale oo munaasabadan dabaaldaga ka hadashay ku simaha madaxwaynaha DDSI ahna madaxwayne ku xigeenka DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax oo ugu horayntii siwayn ugu hanbalyaysan shacabka deegaanka munaasabadan qaaliga ah waxayna munaasabadan ugu hanbalyayasan wafigii uu hogaaminayay madaxwaynaha oo dalka dibadiisa ugu maqan shaqooyin.
Waxayna si qoto dheer uga warbixisay ku simaah madaxwaynuhu marwo sucaad ahmed faarax soonyaalkii taariikheed iyo isbedalka marxaladihii uu soo maray XDSHSI. Waxayna si mug leh ugu warantay ahmiyada ay munaasabadani xusitaankeedu u leedahay dhamaanba shacabwaynaha DDSI.
Marwadu iyada oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay in ay tahay maalintani maalintii shacabka deegaanka xisbiga hormuud u noqon kara shacabka deegaanka waxayna aragka ku dhufatay marwadu in uu XDSHI ka go’antahay gaadhsiinta shacabka deegaanka horumar buuxa iyo xasilooni waarta kuna boorisay shacabka deegaanka dalka iyo dibadaba in ay garab istaagaan XDSHSI.
Waxaa kale oo uyaguna ka hadlay munaasabadan wakiilka u fadhiya EPRDF mudane Sitotaw, oyadaal dhaqameedka iyo waliba wasiirada xafiiska arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo Raxma Suldaan Maxamuud Haybe, kuwaasi oo dhamaantood ka warbixiyay guulaha horumarineed ee uu xisbigu sanadihii ugu danbeeyay ka soo hooyay qorshayaashiisa horumarineed.
Isku soo wada duub oo munaasabadan oo ahayd mid aad u balaadhan oo aanana ku soo koobi karin hal war oo kaliya ayaa waxay qaybaheeda kala ku soo qaadanaynaa warar ka xiga.